Mpamatsy sy orinasa mandeha ho azy - Mpanamboatra mandeha ho azy ao Shina
Milina fanontam-pirinty lehibe miovaova ho azy
Ny milina fanodinana hafanana hydraulic dia ny fitaovana fanontana hafanana avo lenta, ny fahombiazan'ny famokarana 2-3 heny noho ny milina fanaovan-gazety. Mamonjy herinaratra ihany koa izy io, ary afaka manery ny vokatra milimetatra marobe matevina amin'ny tsindry voalanjalanja sy ny fandidiana mety. Raha ampitahaina amin'ireo vokatra mitovy amin'izany, dia misy ny fifehezana ny herinaratra, ny famoahana vatana, ny famolavolana modely, ny fifehezana mikrokomputer. Mety amin'ny fanontana hafanana rehetra izy io.
Masinina fanerena avo lenta avoakan'ny Hydraulika avo roa heny
Ity no iray amin'ireo milina fanodinam-pandeha hafanana mahery vaika indrindra misy vidiny mirary sy fahombiazan'ny olana an-taonany maro. Fanaraha-maso fotoana sy nomerika feno.
Ny milina famindrana hafanana no vahaolana mety indrindra amin'ny orinasa kely, ao anatin'izany ny taratasy famindrana hafanana. Ity milina tsotra ity dia afaka mamindra ny sarinao amin'ny T-shirt, pataloha jeans, fonosana ondana, piozila, pad mouse, taila seramika sns izay fisaka rehetra.
Rotary 4 Station PLC mandeha ho azy Sublimation T Shirt Heat Press Machine
Masinina miisa efatra no mihetsika fanodinana hafanana moto, manangona fotoana sy asa; ary mety amin'ny fandidiana. Ilay milina dia afaka mamindra ny pirinty modely miloko sy tarehintsoratra izay misy sublimation na ranomainty solvent amin'ny vokatra vita amin'ny hemp, fitaovana fibre. Tena mety amin'ny fanontana pirinty amin'ny akanjo, lamba ary lamba elo, tena ara-toekarena sy azo ampiharina, no ho safidinao tsara indrindra.